China Yakakura-mwero fenicha yemapuranga yakakosha-yakaumbwa sanding muchina vanogadzira uye vatengesi |Tenglong Machinery
Wood Texture Drawing Machine
Sanding Machine uye Polishing Machine
Multi-specification tsika embossing muchina 650mm
Wood zviyo zvekudhirowa muchina
Kaviri-headed huni zviyo embossing muchina
Woodworking sander muchina
Edge Banding Woodworking Machine
Yakakura-mwero fenicha yemapuranga yakakosha-yakaumbwa sanding muchina
Product name:Yakaumbwa sanding muchina
Kushandiswa kwechigadzirwa:multi-specification huni, nezvimwewo.
Chigadzirwa Brand:Tenglong Machinery
Product Address:Bali Metal Electromechanical Industrial Park, Suining County, Xuzhou
Muchina wejecha wakasarudzika unoumbwa nevhiri rekukuya sisal uye vhiri rekukuya, rimwe roller, muchina mumwe une ma roller maviri, maviri-kumberi uye reverse kugaya.Iyo inotora akawanda-gradient kugaya vhiri zino profile, yakasanganiswa nemagetsi kusimudza kudzora kureba kweboka re roller, kuitira kugaya kunobudirira kweshizha rekugaya kana kunyora magiropu akareruka, nezvimwe, zviri nyore kushanda, musanganiswa wezviviri izvi zvinogona kugaya zvakaoma. uye special-shaped flat plates panguva imwe chete, nemigumisiro iri nani.
Iyo yakakosha-yakaita sanding muchina ine yakazvimiririra yekusimudza chimiro uye frequency yekushandura kukurumidza kudzora, iyo yakanakira iyo kudzvanywa kudzora uye jecha kumhanya kwega yega sanding I sequence, uye inogona kusangana nejecha zvinodiwa zveakasiyana maitiro zvigadzirwa.Iyo yakakosha-yakaita sanding muchina ndeimwe yemidziyo mikuru yekugadzira fekitori yefenicha, uye kushanda kwayo kwakanaka uye kunaka kwebasa zvinokanganisa kugadzirwa kwefekitori yefenicha.
1. Muchina wejecha wakasarudzika wakakodzera marudzi ese emapuranga akasimba, mapuranga anoumbwa, density board, maprimers, mashanga machena, ingave iri yenguva dzose, nzvimbo yakasarudzika uye yakakomberedzwa, inogona kuve yakaoma. uye yakakwenenzverwa, uye nzvimbo yehuni ine yakakosha sanding effect.
2. Dhiyabhorosi jecha rinoshandisa nhamba huru, yakanyatsorongeka yakanyatsogadzika vertical grinding discs, kudzivirira chiitiko chekushayikwa kwema grooves, uye yakashongedzerwa nekukurumidza-kuchinja kwekubatanidza, izvo zvinoita kuti zvive nyore kutsiva jecha mitsetse.
3. Longitudinal grinding roller inotora nheyo yekufamba kwe centrifugal, inotora nguva shoma yekutsvaira uye kubvisa, kushanda kunowedzera kanopfuura ka6, uye inoponesa basa uye nguva.
4. Iyo yakakosha-yakaita sanding muchina yakashongedzerwa nepamusoro-yekupedzisira frequency kutendeuka inomhanyisa dhizaini yekudzora, iyo inogona kugadzirisa yakakodzera kumhanya zvinoenderana nemahwendefa akasiyana-siyana kuti ave nechokwadi chekubudirira kwebasa uye mhedzisiro yejecha.
5. Iva nechokwadi chekugadzikana uye hupenyu hwebasa remushini wejecha.
6. Iyo yakakosha-yakaumbwa sanding muchina ine yakasimba kuchinjika, iyo inogona kuvandudza dimensional kurongeka kwebasa uye kushata kwepamusoro kweiyo workpiece.
7. Chimiro chejecha muchina chinogona kugadzirisa workpieces nehupamhi hukuru, pamwe chete nekushanda kwakamanikana.
8. Muchina wejecha wechimiro unogona kugadzirisa marudzi ese enzvimbo dzakati sandara, pamwe nemhando dzese dzenzvimbo dzakakombama.
9. Iyo yakakosha-yakaumbwa sanding muchina inogona kushandiswa pakukura-kukura pamwe chete nediki-batch kugadzirwa.
10. Iyo yakakosha-yakaumbwa sanding muchina inoderedza kupera kweiyo yekusangana roller yemusoro webasa, inovandudza kurongeka kwejecha, uye inoona otomatiki kugadzirisa kwekuita sanding.
Zvakapfuura: Yakazara otomatiki emhando yepamusoro 620-6 waya yekudhirowa muchina
Zvinotevera: Kupukuta Sander Muchina wemapuranga
Brush Sanding Machine ye Curved Surfaces
Kupukuta Sander Muchina wemapuranga
huni polishing muchina
Nyora meseji yako pano uye utumire kwatiri
1320-4 huni hwekugadzira waya yekudhirowa muchina
Kero: Bali Metal Electromemechanical, Suining, Xuzhou, Jiangsu, China.